दैलादैलामा स्थानीय सरकार: नवलपुरको विकास खर्च ६२ प्रतिशतमै सीमित
By administrator on	 September 1, 2020 देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
डोलराज रानाभाट, गैँडाकोट नवलपुर, १६ भदौ ।
केन्द्रीकृत राज्य सत्ताका कारण गाउँठाउँमा विकास नभएको भनेर संघीयता आएपनि विकास खर्चले अझै गति लिन सकेको छैन । स्थानीय चुनावपछि दैलादैलामा सरकार आएपनि विकास खर्चको अवस्थामा भने उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नवलपुर जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगततर्फ गरी कुल ८ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख ५१ हजार प्राप्त भएपनि ६ अर्ब ७० करोड ७० लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । यसरी कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । १ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैया बजेटको कामै भएन ।
आएको कुल विकास बजेट (पूँजीगत )को जम्मा ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको कुल बजेट २ अर्व ९६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा १ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहनशरण भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट पूँजीगत बजेट रु. ९० करोड ६७ लाख ६२ हजार ५ सय ९९ अख्तियारी प्राप्त भएपनि जम्मा ४४ करोड ७९ लाख ६० हजार ३८७ रुपैयाँ(४९.४०%)खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट सोही शीर्षकका लागि २ अर्व ६ करोड १३ लाख ३८ हजार बजेट अख्यिारी प्राप्त भएपनि जम्मा १ अर्व ३८ करोड ५९ लाख ३४ हजार ३६३ रुपैयाँ(६७.२३ % ) खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा भने प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत खर्च क्षमता, संघको भन्दा राम्रा देखिएको छ ।
त्यस्तै चालुतर्फ भने ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । संघ र प्रदेशबाट जिल्लालाई प्राप्त कुल बजेट ५ अर्व ४१ करोड ६१ लाख ५१ हजार बजेटमा ४ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ३ हजार खर्च भएको छ । जसमा संघ सरकारबाट ४ अर्व ८८ करोड ५९ लाख ७ हजार अख्तियारी प्राप्त भएकामा ४ अर्व ५० करोड ७४ लाख २ हजार (९२.२५ % )खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट सोही शीर्षकका लागि ५३ करोड २ लाख ४४ हजार अख्तियारी प्राप्त भएपनि जम्मा ३६ करोड ५८ लाख १ हजार रुपैया (६८.९९%)खर्च भएको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु बजेटको खर्च क्षमता प्रदेशको भन्दा संघतर्फकोप्रभावकारी देखिएको छ ।
यसरी जिल्लाभर संघ सरकारले चालु र पुँजीगत शीर्षकमा कुल ५ अर्ब ७९ करोड २६ लाख ६९ हजार उपलब्ध गराएकामा ८५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख ६२ हजार खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत शीर्षकमा गरी कुल २ अर्ब ५९ करोड १५ लाख ८२ हजार प्राप्त भएको पनि जम्मा १ अर्व ७५ करोड १७ लाख ३५ हजार(६७.५९ %) खर्च भएको छ ।
तर कुल बजेटमा पालिकास्तरमा निकासाको तुलना गर्दा संघको भन्दा प्रदेशको निराशाजनक छ । संघबाट जिल्लामा निकासा भएको ४ अर्व ९५ करोड ५३ लाख ६२ हजारमध्ये पालिकामा जम्मा ३ अर्ब ५८ करोड५ लाख २ हजार अर्थात् ७२.२६% मात्रै खर्च भएको छ भने प्रदेशतर्फ त झनै निराशा जनक छ । प्रदेशतर्फ जिल्लामा निकासा भएको कुल बजेट १ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ३५ हजारमध्ये पालिकाहरुमा जम्मा २२ करोड ६८ लाख ३८ हजार अर्थात् १२.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा १ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ३९ हजार २३६ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको छ जसमा संघतर्फबाट ९० करोड १७ लाख १ हजार र प्रदेशतर्फ ३३ करोड ५१ लाख ३८ हजार ७६ रुपैयाँ रहेको छ ।
पालिकास्तरको अख्तियारी र खर्चको अवस्था
जिल्लामा रहेका ८ स्थानीय तहमा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । यीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघ र प्रदेश सरकारको गरी सबैभन्दा बढी बजेट कावासोती नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले चालु पुँजी गरी कुल ७७ करोड १६ लाख ९ हजार खर्च गर्ने अख्तियारी पाएपनि जम्मा ८९.१० प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ७५ लाख ५२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो अंकको बजेट प्राप्त गर्ने नगरपालिका गैँडाकोट रहेको छ । जसले ६७ करोड ६७ लाख ६२ हजार खर्च गर्ने अख्तियारी पाएपनि जम्मा ६३ करोड २४ लाख ९५ हजार (९३.४५% ) खर्च गरेको छ ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाले ६७ करोड ४२ लाख २४ हजार खर्च गर्ने अधिकार पाएपनि जम्मा ६० करोड ५२ लाख ५६ हजार (८९.७७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
देवचुली नगरपालिकाले ६० करोड १० लाख७३ हजार खर्च गर्न अख्तियारी पाएकामा ९९ .२७ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाले ४५ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने ४१ करोड ९४ लाख ५ हजार (९२.८५%) खर्च गरेको छ ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको ३५ करोड ७ लाख १९ हजार बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएपनि ३३ करोड २ लाख ४८ हजार (९४.१६५० खर्च गरेको छ ।
बुलिङटार गाउँपालिकाले ३० करोड ८२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भएपनि जम्मा २८ करोड ३८ लाख ९८ हजार (९२.११% )खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको बौदीकाली गाउँपालिकाले २९ करोड ७४ लाख ७५ हजार बजेट पाएपनि २५ करोड १७ लाख १ हजार (८४.६१%) खर्च गरेको छ ।
दोष जति कोभिड १९ लाई
देशभर नै विकास निर्माणका कार्य त पूरा भएनन नि? भनेर सोध्यो भने सजिलै जवाफ आउँछ कोभिड १९ का कारण तर यो नै मूल कारण भने होइन । किनकि विकास गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा ४ ओटा किस्तामा पालिकाहरुलाई बजेट निकासा गर्ने नियम रहेको छ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक मोशनशरण भण्डारीका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ शीर्षकबाट बजेट उपलब्ध गराउँदछ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट दिइएको बजेट पालिकाहरुले फिर्ता गर्नुपर्दैन । पालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने अधिकार छ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बचत भएपनि फिर्ता गर्नुपर्दैन । अर्को वर्ष पुनः बचत बजेटले काम गर्न पाउछन् ।
ससर्त अनुदानबाट आएको बजेट कार्यान्वयन सर्तसहितका आयोजनामा हुन्छ । रकम आउँछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभए जुन जुन सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको हो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी बजेट केन्द्र र प्रदेश सरकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ तर फिर्ता नगरे अर्को वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटबाट कट्टा भई वाँकी रकम मात्रै निकासा प्राप्त गर्छन ।समपूरक र अनुदान ठूला आयोजनाहरु भए मात्रै आवश्यकताअनुसार प्राप्त हुने गर्छ र खर्च हुन बाँकी बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ । यो दुई अनुदान प्रायः ५०/५० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन हुने गरी प्राप्त हुने गर्छ ।
त्यस्तै पालिकाहरुलाई आउने अन्तःशुल्क, मूअक वन रोयल्टी लगायतका सबै राजस्व आम्दानी भने पालिकाको सञ्चित कोष खातामा सिधै जाने जम्मा गरिन्छ । गतवर्षको भदौ महिना अघिसम्म जिल्लाकै कोष तथा लेखा नियन्त्रकबाटै निकासा गरिने भएपनि त्यसपश्चात्महालेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौँबाट सिधै पालिकाको खातामा जम्मा हुने गर्दछ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीका अनुसार साउनमा पहिलो किस्ता त्यसपश्चात् क्रमशः कार्तिक, माघ र वैशाखमा रकम निकासा हुन्छ । पहिलो किस्ता निकासामा पालिकाहरुले केही पनि विवरण पेस गर्नुपर्दैन तर त्यसपछिका वाँकी किस्ता लिनका लागि काम तथा आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण र खर्च सहितको फाँटवारी पेस गर्नुपर्दछ तर भण्डारीको अनुभव भने पालिकाहरुको सक्रियतामा उत्साह भएको पाउनु हुन्न । “हामी यो काम गर्दछौँ किस्ता रकम कहिले आउँछ भनी सोधपुछ गर्ने पालिका कमैछन् । त्यसको ठीक विपरीत भण्डारीले नै फोन गरी तपाईहरुको किस्ता तयार छ खर्च र योजनाको विवरण लिएर चाँडै आउनुहोस् भन्नुपरेको छ ।”
यसले पनि के देखाउँछ भने दैलोमा स्थानीय सरकार भन्नलाई मात्रै हो । अर्को तथ्य के छ भने नेपालमा कोरानाका कारण मानिसहरुको भीडभाड रोक्ने र विकास निर्माणका कार्य नै ठप्प हुने गरी लकडाउन जारी भएको चैत्र ११ गते २०७६ हो जुन महिनासम्म पालिकाहरुमा ३ किस्ता गइसकेको हुन्छ । जसले विकासका कार्य गर्न दृढ रहेका नेतृत्वका लागि पर्याप्त हुन्छ तर असारे विकासले यसपटक पनि छाडेन ।
लकडाउनमा पनि कार्यालय एक दिन बन्द गरिएन ः कार्यालय प्रमुख भण्डारी
चैत्र ११ देखि जारी लकडाउनमा धेरै सरकारी कर्मचारीले आराम गरे । आवश्यकताअनुसार कार्यालय आउनेजाने गरी सजिलै बिताएपनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुर भने सधैँका दिनहरुमा जस्तै खुल्यो । कार्यालय प्रमुख भण्डारी भन्नुहुन्छ, “एकदिन पनि बन्द भएन । जिल्लाभर बजेट दिने नै हामी । थैलीनै बन्द भए कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छर? त्यसैले कर्मचारीहरुलाई आलोपालो गर्दै भए पनि रातिसम्म कार्यालय चल्यो ।” भण्डारीले भनेझँै सरकारले गाउँपालिकाहरुलाई उपलब्ध गराएको ५ लाख र नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको १० लाख तुरुन्तै निकासा गरिदिनुभयो । जसको प्रयोगबाट पालिकाहरुले राहत वितरणलगायत क्वारेनटाइन निर्माण आदिमा खर्च गर्न पाएका थिए । २०७४ साल कार्तिक महिनाको १९ गतेदेखि सेवा दिन सुरु गरेको कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालित छ । ११ जनाको दरबन्दी पूरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाको ७५ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारमा जाने तीन तहको सरकारमा सबैभन्दाबलियो सरकार नै यही भएको उहाँको पनि तर्क छ । घर घर पुग्ने स्थानीय सरकार हो, उहाँले भन्नुभयो “केको विकास आवश्यक छ सबै थाहा छ । यो हुँदा खर्च राम्रो हुनुपर्ने हो ।” यद्यपि भण्डारीले जिल्लामा भएको खर्च प्रतिशतलाई भने राम्रै मान्नुहुन्छ । कोभिड १९ पनि कारक बन्यो उहाँ भन्नुहुन्छ, “यति हुँदाहुँदै पनि खर्चको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनकै हो।”
नवलपुरमा पीसीआर मेशीन आउने निश्चित भएको मेयर पौडेलको दावी
गैडाकोटका युबाहरुले ल्याए इजि–पे
गणित बिषयलाई जिवनसँग जोडेर पढाउन आवश्यक
कोरोना भाइरस नेपालः थपिए ११ सय संक्रमित, १५ जनाको मृत्यु
नवलपुरमा कोरोना सक्रिय सङ्क्रमित २ सय ६४, चार सय सङ्क्रमणमुक्त